Composting Guide: Atụmatụ na usoro Banyere Composting - Ikkaro
Nchịkọta ọdịnaya metụtara composting na composting.
Na ụdị a ị ga-ahụ:
Ozi gbasara compost na otu esi esi kọ compost.
Ndị na-eme fatịlaịza, ụlọ na azụmahịa
Ngwaọrụ na ngwa eji etinye nri ala.
Toolsmepụta ngwaọrụ a na-eji arụpụta ụlọ
Aghụghọ na ezigbo ahụmịhe, na-akọwa etu m si eme compost nkem
Otu esi eji compost anyị nwetara
Gịnị bụ compost? Ọ bụ decomposition nke organic nke na-aghọ compost.